Mpanamboatra akanjo sy akanjo mpamatsy fitsaboana matihanina any Sina | Orient
1.breathable, co-friendly, antistatic, anti-oil,
2. Sakano tsara ny rà, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny fahatapahan'ny rano hafa.
3. Fisorohana ny viriosy, bakteria ary fifindran'ny mikraoba
4.OEM / ODM misy
Anaran'ny vokatra Akanjo fanokanana azo ampiasaina / akanjo miaro
Haben'ny vokatra M / L / XL / XXL, S / M / L / XL / XXL
Fampiasana Fiarovana fitaovana fiarovana
Fitaovana pp + pe 73g
Karazana vokatra EN14126
niaviany Sina (Tanibe)
Modely NO. Akanjo fanamiana fiarovana amin'ny akanjo fiarovana
Customization OEM / ODM misy
hiteraka Nosoratan'i EO gazy / Taratra
Anaran'ny marika MEIYIMEI
Fitaovana classifica kilasy 1
Protective famolavolana ny akanjo miaro
Famolavolana 1.Hooden: famolavolana loha hooden, famolavolana cap elastika, afaka manakana ny vovoka sy ny badgecreatures;
2.Zipper design: Mora entina sy esorina ary ny famehezana tsara kokoa;
3.Elastic cuffs: Telescopic, sakana mahomby hampiasana mora kokoa;
Famolavolana volo 4.Lose: volom-bolo elastika, mitafy mety kokoa, hamaly ny filan'ny tarehimarika samihafa.
Ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana azo alain-tahaka dia afaka manilika tsara ny fiparitahan'ny sombim-bava am-piasana sy amin'ny tontolo manodidina hafa. Vokatry ny fantsom-by kely, vato torotoro, famafazana simika ary zanaka lahy.
Fa maninona no nisafidy ny lamba fiarovanay:
1. 20 taona mahery niainana tamin'ny famokarana sy ny fanaovana akanjo fiarovana
2. Mahafinaritra sy matotra ny teknolojia
3. Andalana famokarana mandeha ho azy
4. Hafa ny akanjo miaro izay azo vokarina
5. Fanaraha-maso kalitao henjana ho an'ny fanakatonana fiarovana
Previous: Kitapo santionany Virosy ORIENTMED
Manaraka: Saron-tava tarehy azo ampiasaina 3ply amin'ny karazana I, Type II, Type IIR